Maliana mpikatroka an’aterineto manampy ara-bola ny mpianatra ao Tombouctou amin’ny fanomezana ora fianarana akademika manokana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Septambra 2015 9:14 GMT
Nanangana tetikasan-teknolojia vaovao antsoina hoe ” Tombouctou” ho fanampiana ny fampianarana akademika amin'ny tanàna iray nandalo ny hamafin'ny ady an-tano vao haingana nisy tao amin'io tanàna io ny vondrom-piarahamonina an'aterineton'i Tombouctou, Mali.
Ny tanjona voalohan'ity tetikasa mitentina arivo dolara amerikana, izay notohanan'ny Maliana mpikatroka an'aterineto, antsoina hoe Recam manontolo ity , dia ny hanomezana ora fianarana fanampiny iray volana hanenjehana ny famitana lesona hanaovana fanadinana ho an'ireo mpianatry ny Lisea ao Tombouctou sy hanampiana ireo mpianatra ho mpampianatra avy ao amin'ny Ivotoerana Frantsay-Arabo Hégire ao Tombouctou. Itony fianarana manokana itony dia tsy natao hikarakarana fanadinana fotsiny ihany, fa natao ihany koa hampiakarana ny taham-pahafahana fanadinana amin'ireo tanàna ao avaratr'i Mali izay tratran'ny krizim-pilaminana goavana.
Tsy misy azo atao afa-tsy ny misaotra ireo tsara sitrapo rehetra izay mitondra ny fanohanany amin'ny fanabeazana ny ankizy izay hitondra an'i Mali rahampitso. Mankasitraka indrindra ry Recam.
Ao anatin'ny faniriana hisokafan'ny hoavy matanjaka sy feno fanambinana ho an'ny mpianatra amin'ny alalan'ity fisantaran'andraikitra ity ny manampahefana ara-panabeazan'i Tombouctou no nandray tsara ity ezaka sy fahalalaha-tanana ity.